पलेँटीमा आँखाको भाका
नेपालयले आयोजना गर्दै आएको सांगीतिक कार्यक्रम ‘पलेँटी शृङ्खला’मा यसपटक नेत्र विशेषज्ञ सुमन थापा प्रस्तुत भएका छन् । शुक्रवार साँझ कालिकास्थानस्थित नेपालयको ‘आर’शालामा प्रस्तुत भएको कार्यक्रममा सुमनले १३ वटा गीत सुनाए । कार्यक्रममा प्रस्तुत भएका कतिपय गीतहरू आँखा र दृष्टिसँग सम्बन्धित थिए ।
आफ्नो पेशासँग सम्बन्धित संस्मरण सुनाउँदै गाइरहेका सुमनलाई सुन्दा लाग्थ्यो उनी आँखा र भाकाका संगम हुन् । कार्यक्रमको सुरुवातमा उनको सांगीतिक यात्राको पहिलो चरणमा सुमनको आफ्नै शैली झल्किएका दुईवटा गीत प्रस्तुत भएपछि दोस्रो चरणमा गाइएका सबै गीतहरू नयाँ थिए ।
दोस्रो चरणका ९ वटा गीतहरू गीतकार तथा कवि श्रवण मुकारुङले सृजना गरेका थिए । सुमनका निम्ति बनेका सबै नयाँ गीतमा संगीतकार आभासको धुन सृजना रहेको थियो ।
प्राय अंग्रेजी भाषामा गाउने सुमन पहिलोपल्ट नेपाली गीत मात्र प्रस्तुत गरे । तिलगंगा अस्पतालसँग सम्बन्धित डा. सुमन आफ्नो सांगितिक रुचिलाई सदुपयोग गर्दै सामाजिक कार्यका लागि रकम जुटाउँछन् र विकट गाउँ पुगेर निशुल्क स्वास्थ शिविर संचालन गर्छन् । त्यसको लागि उनी ‘एक एक पाइला’ नामक संस्थासँग आबद्ध छन् ।
कार्यक्रममा सुमनले आशा राईसँग युगल गीत पनि प्रस्तुत गरे । जन्मदै दृष्टिबिहिन रहेकी आशालाई नै केन्द्रमा राखेर रचिएका २ वटा गीत प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यक्रमको अत्यतिर प्रस्तुत भएका बाँकी गीत गीत मध्ये ‘ओ पासाङ दाइ, ओ बैनी फूलमतिया’मा प्रयोग भएको शब्द ‘स्लिट ल्याप्प’लाई बुझाउन डा. सुमनले आँखा जाँच्ने उपकरण नै बोकेर आएका थिए ।
त्यसपछि प्रस्तुत भएको फंकी शैलीको गीत ‘हतार छ, एकदम हतार छ, शहरको व्यस्तता र डा. सुमनको पेशासँग जोडेर प्रस्तुत गरिएको थियो ।
तिहारको माहोललाई ध्यानमा राखेर प्रस्तुत गरिएको अन्तिम गीत ‘साँझको बेला, अप्ठ्यारो बाटो’ पनि आँखासँगै जोडिएको थियो । यो गीत देउसी पारामा प्रस्तुत भएको थियो ।
गीत सुनिसकेपछि कार्यक्रममा उपस्थित गीतकार श्रवण मुकारुङले भने ‘यसपालिको हाम्रो यो सांगीतिक सहकार्यले मलाई नयाँ गीत लेख्न प्रेरित गर्‍याे । अहिले पलेँटीमा गीत सुनिसकेपछि लाग्यो यो हाम्रो रचनात्मक कर्मको एउटा सुन्दर मोड पनि हो ।‘
गीतकार रत्नशमशेर थापा भन्दै थिए ‘नयाँ प्रगले नै गीत संगीतको रचनाको घेरालाई फराकिलो पार्छ, आजको प्रयोग राम्रो छ ।’
यसपालिको पलेँटीमा वाद्यवादनतर्फ किबोर्डमा दिनेश रेग्मी, गिटारमा सुरज प्रधान र प्रकसनमा सुन्दर महर्जनले साथ दिएका थिए । सुमनसँगको पलेँटी शनिबार साँझ पनि हुनेछ ।